Yakanakisisa Odoland Folding Campfire Grill, Camping Fire Pit, Outdoor Wood Stove Burner, 304 Premium Stainless Steel, Portable Camping Charcoal Grill neBag Carrying for Backpacking Hiking Travel Picnic BBQ Manufacturer and Factory |Chuangya
Odoland Folding Campfire Grill, Camping Fire Pit, Outdoor Wood Stove Burner, 304 Premium Stainless Steel, Portable Camping Charcoal Grill neBag Rokutakurisa reBackpacking Hiking Travel Picnic BBQ.
Material Simbi isina ngura
Color Simbi isina ngura
Multi-kushandisa Collapsible Grill - Iyo inodonhamusasa grillinogona kushandiswa se campfire grill gedhi kana musasa wemoto gomba.Unogona kuishandisa kubikira moto wakavhurika, kana parwendo mukati mekunze kukuru.Yakanakira chero chiitiko.Iyo inogamuchirwa yekuwedzera kune yako yekufamba-famba, yekudzika musasa cookware, bushcraft giya, kana emergency kits yekupona.
Nyore Kushandisa - Iine zvikamu zvishanu.Iwe unogona nyore kuseta kana kuiputsa mukati isingasviki 1 miniti.Tora chef wako uye grill zvese kubva kuhuku, nyama kusvika kune mavheji.Yakanakira kudzika musasa, kukwira makomo, mapikiniki, patio, mukati, mapati ekunze, kufamba, zororo, paki, gadheni, mahombekombe neshamwari dzako kana mhuri.
Yakakwana Pakutakura - Yakayerwa 12.2 ″ x12.2 ″ x8.3 ″ (LxWxH) kana yakapetwa uye 14 ″ x7.8 ″ x2 ″ (LxWxH) kana yapetwa.Nekutakura bhegi, zviri nyore kuchengetedza uye kutakura.
Durable Material - Iyo yekumisa musasa inogadzirwa nesimbi isina tsvina.Iyo inorwisa-ngura, inodzivirira kupisa, inodzivirira kukwenya, kusagadzikana kwemarara uye hazvisi nyore kukanganiswa kuve nechokwadi chekushandisa kwenguva refu.Grill-yakaita sefunnel, ine yakanakisa-inopikisa mhepo, inogona kupa yakakwirira-inoshanda kuunganidza kupisa.Makomba ekuyerera kwemhepo uye bhodhi redhaka iro rinopatsanura kabhoni neguruva rinobatsira marasha kupisa zvine mutsindo.
Great Benifit - Zvikamu zvese zvakatenderedzwa zvakatsetseka, dzivirira kukuvadza maoko ako.Iyo ine isiri-tsvimbo yekubikira uye inogona kucheneswa zviri nyore mushure mekubika mbabvu dzine saucy kana huku ine muto.
Zvakapfuura: Inotakurika Kunze Kupeta Campfire Grill
Zvinotevera: 2.1m 2.4m 2.7m 3.0m 3.6m Telescopic tsvimbo dzehove dzakasiyana-siyana Carbon Fiber Fishing Rod
10kg kettlebell yakanaka mhando kettlebell set Bla ...
HV-Sports Canvas Tende Isingapindi mvura Bhero Tende ye ...
Ruvara Hex rubber yakavharwa dumbbell